Ciidamada Faransiiska oo odayaal burcar badeed ah ku wareejiyey dawladda Puntland. – Radio Daljir
Bossaso, Apr 27 – Ciidamada Faransiiska ee jooga xeebaha Somaliya ayaa maanta 6 nin oo burcad badeed ah ku wareejiyay dawladda Puntland, kuwaas oo da?doodu u dhaxeyso 40-50 sano taasoo la yaab ku noqotay dadkii daawanayey markii laga soo dajinayey dakadda magaalada Bossaso.
Dadweyne ayaa ku soo xoomay raggan burcad badeeda ah markii la keenay dekadda magaalada Bossaso kuwaasoo ku dhawaaqayey erayo ay ka mid ahaayeen odayaasha burcadda ah daya, ceebooba iyo kuwa kale, waxaana loo dhaadhiciyey xabsi halkaasi ku yaalla.
Taliyaha ciidanka dekadda Bossaso oo la hadlayey idaacadda Daljir wax yar ka dib markii ay burcadda la wareegeen ayaa sheegay in raggani ay ka qaraabasho tageen meel u dhaw magaalada Muqdisho lana qabtay xilli ay ku guda jireen hawsha burcadnimada ah sida ay ku wargaliyeen ciidamada Farsiisku balse ay baaritaan ku sameynayaan.
Hawsha la kale wareegidda burcad badeedda ayaa ka dhacday meel 30 mile u jirta xeebta magaalada Bossaso halkaas oo uu saakadii hore gaaray markab dagaal oo ay leedahay Puntland ayna la socdeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dawladda Puntland.
Boqolal burcad badeed ah ayaa ku jira xabsiyada Puntland kuwaasi oo intooda badan ay sugayaan in la maxkamadeeyo qaarna lagu xukumay xabsiyo kale duwan.
Axmed Sh, Maxamed Tallmanb